တဈခါတုနျးက တိုငျးပွညျတဈခုမှာ ဘုရငျတဈပါး ရှိခဲ့တယျ ။ သူ့ဆီမှာ အမဲလိုကျခှေး ဆယျကောငျ မှေးထားတယျ ။ သူ့ရဲ့ ဝနျကွီးတှေ ထဲက တဈယောကျယောကျ အမှားအယှငျး လုပျပွီဆိုတာနဲ့ အဲ့ဒီခှေးတှေ ရှမှေ့ာ ပဈခခြိုငျးလေ့ ရှိတယျ ။ ခှေးတှကေ အဲ့ဒီ ဝနျကွီးကို အရိုးနဲ့အသား တဈခွားစီ ဖွဈအောငျ လုပျပဈ လိုကျတယျ ။
တဈနတေ့ော့ ဘုရငျ့ရဲ့ အထူး အရေးပါတဲ့ ဝနျကွီးတဈဦးက ဘုရငျကို မှားယှငျးစှာ အကွံဉာဏျ ပေးမိတယျ ။ ဒီအကွံကို ဘုရငျက မနှဈမြို့ ခဲ့ဘူး ။ ဒါနဲ့ အဲ့ဒီဝနျကွီးကိုလညျး ခှေးတှေ ရှမှေ့ာ ပဈခဖြို့ ဘုရငျက အမိနျ့ခြ လိုကျတယျ ။ အဲ့ဒါနဲ့ ဝနျကွီးက ဘုရငျဆီမှာ တောငျးဆိုမှု တဈခု ပွုလုပျခဲ့တယျ ။
" အရှငျမငျးကွီး.. ခငျဗြား ကြှနျတျော အရှငျ့မငျးကွီးဆီမှာ နမှေ့နျးမသိ ညမှနျးမသိ အလုပျအကွှေး ပွုစုခဲ့ပါတယျ ။ ခု အရှငျမငျးကွီး ကတော့ ကြှနျတျောမြိုး အမှားလေးတဈခု လုပျမိတဲ့ အပျေါမှာ ဒီလောကျ ကွီးမားတဲ့ ပဈဒဏျကို ပေးခဲ့ပါတယျ ။ ဘုရငျ့ အမိနျ့အတိုငျး နာခံဖို့ အသငျ့ပါပဲ ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျောမြိုး အနှံတာခံ အလုပျအကြှေး ပွုစုခဲ့တာလေးကို ထောကျထားပွီး ဆယျရကျလောကျ ကြှနျတေျာ့ကို အခှငျ့အရေး ပေးပါ ။ ပွီးရငျ မုခြ ကြှနျတေျာ့ကို ခှေးတှေ ရှမှေ့ာ ပဈခလြိုကျပါ "
ဒါနဲ့ ဘုရငျကလညျး ဝနျကွီးကို ဆယျရကျလောကျ အခှငျ့အရေး ပေးလိုကျတယျ ။ ဝနျကွီးလညျး ဘုရငျ့ဆီ ကနေ တနျးတနျး မတျမတျ ခှေးတှကေို ထိနျးသိမျး စောငျ့ရှောကျတဲ့ သူဆီကို ထှကျလာခဲ့တယျ။ ပွီးတော့ ခှေးထိနျးကို ပွောတယျ ။
" ငါ ဒီခှေးတှနေဲ့ ဆယျရကျလောကျ အတူ နခေငျြတယျ ။ သူတို့ရဲ့ ဝယြောဝစ်စ အားလုံးလညျး ငါတာဝနျ ယူမယျ "
ခှေးထိနျးက ဝနျကွီးရဲ့စကား ကွားတော့ အံသွ မှငျသကျ သှားတယျ။ ဒါပမေယျ့ ခှငျ့ပွု ပေးလိုကျတယျ ။ အဲ့ဒီဆယျရကျ အတှငျး ဝနျကွီးက ခှေးတှရေဲ့ စားသောကျဖို့ အိပျဖို့ ရခြေိုးပေးဖို့က အစ အလုပျအားလုံးကို သခြော တာဝနျယူ လုပျကိုငျတယျ ။ ဆယျရကျပွညျ့တော့ ဘုရငျက သူ့ အခိုငျးအစတှေေ ဝနျကွီးကို ခှေးတှေ ရှမှေ့ာ ပဈခဖြို့ အမိနျ့ပေးတယျ ။
ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီမှာ ရပျကွညျ့နတေဲ့ သူတှေ အားလုံး မွငျကှငျးကို ကွညျ့ပွီးအံ့အားသငျ့ သှားကွတယျ ။ ဘာလို့လညျး ဆိုတော့ ဒီနေ့ ဒီအခြိနျထိ ဒီခှေးတှေ ရှမှေ့ာ မရမေတှကျ နိုငျအောငျ ဝနျကွီးတှေ အသကျပေးသှား ခဲ့ပွီးပွီ ။ ဝနျကွီးတိုငျးကို အဲ့ဒီ ခှေးတှကေ အပိုငျးပိုငျး အစစ လုပျပဈ ခဲ့တယျ ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီခှေးတှပေဲ ဒီနေ့ ဒီဝနျကွီးရဲ့ ခွထေောကျတှကေို ယကျပေးနေ ကွတယျ ။ ဘုရငျလညျး ဒါကို မွငျတော့ အံသွပွီးမေးတယျ ။
" ခှေးတှေ ဒီတဈခါ ဘယျလို ဖွဈသှား ကွရ တာတုနျး ? " ဆိုတော့မှ ဝနျကွီးက ပွနျဖွတေယျ ။
" အရှငျမငျးကွီး ကနျြးမာ ပါစေ ။ ကြှနျတျော အရှငျမငျးကွီးကို ဒီမွငျကှငျးကိုပဲ ပွခငျြနေ တာပါ ။ ကြှနျတျောမြိုး ဆယျရကျပဲ ဒီခှေးတှကေို ပွုစု ခဲ့ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ဒီခှေးတှကေ ဒီနေ့ ကြှနျတျောမြိုး ပွုစု စောငျ့ရှောကျ ခဲ့တဲ့ ကြေးဇူးတှကေို မမေ့သှား ခဲ့ပါဘူး ။ ကြှနျတျောဟာ အရှငျမငျးကွီး ဆီမှာ နရေ့ော ညပါ ဆယျနှဈလောကျထိ ပွုစု စောငျ့ရှောကျခဲ့တယျ ။ ဒါပမေယျ့လညျး အရှငျမငျးကွီးက ကြှနျတေျာ့မြိုးရဲ့ အမှားတဈခု အတှကျ ကြှနျတေျာ့မြိုးရဲ့ နှဈပေါငျး မြားစှာ ပွုစုခဲ့တာတှကေို ကြောခိုငျးပဈ လိုကျတယျ "
အဲ့ဒီအခါမှာ ဘုရငျက သူ့ရဲ့ အမှား အပျေါမှာ ပွငျးပွငျး ထနျထနျ ခံစားမိသှားတယျ..
အဲ့ဒါနဲ့ ဝနျကွီးကို အဲ့ဒီနရော ကနေ ချေါသှားခိုငျးပွီး မိကြောငျးကနျ ထဲကို ပဈခခြိုငျး လိုကျတယျ ။
ငယျငယျတုနျးက ဖတျခဲ့ရတဲ့ ကဗြာလေးကို သတိ ရသှားတယျ ။ မတရား လုပျဖို့ကိုပဲ စိတျပိုငျးဖွတျ ထားတဲ့ သူတဈယောကျကို အထောကျအထား သကျသေ သာဓကတှေ ပွနရေငျလညျး အလကားပါပဲ ။
( အကငျြ့ ယုတျတဲ့လူက အကငျြ့ယုတျနဦေးမှာပဲ )
တစ်ခါတုန်းက တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာ ဘုရင်တစ်ပါး ရှိခဲ့တယ် ။ သူ့ဆီမှာ အမဲလိုက်ခွေး ဆယ်ကောင် မွေးထားတယ် ။ သူ့ရဲ့ ဝန်ကြီးတွေ ထဲက တစ်ယောက်ယောက် အမှားအယွင်း လုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ အဲ့ဒီခွေးတွေ ရှေ့မှာ ပစ်ချခိုင်းလေ့ ရှိတယ် ။ ခွေးတွေက အဲ့ဒီ ဝန်ကြီးကို အရိုးနဲ့အသား တစ်ခြားစီ ဖြစ်အောင် လုပ်ပစ် လိုက်တယ် ။
တစ်နေ့တော့ ဘုရင့်ရဲ့ အထူး အရေးပါတဲ့ ဝန်ကြီးတစ်ဦးက ဘုရင်ကို မှားယွင်းစွာ အကြံဥာဏ် ပေးမိတယ် ။ ဒီအကြံကို ဘုရင်က မနှစ်မျို့ ခဲ့ဘူး ။ ဒါနဲ့ အဲ့ဒီဝန်ကြီးကိုလည်း ခွေးတွေ ရှေ့မှာ ပစ်ချဖို့ ဘုရင်က အမိန့်ချ လိုက်တယ် ။ အဲ့ဒါနဲ့ ဝန်ကြီးက ဘုရင်ဆီမှာ တောင်းဆိုမှု တစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့တယ် ။
" အရှင်မင်းကြီး.. ခင်ဗျား ကျွန်တော် အရှင့်မင်းကြီး ဆီမှာ နေ့မှန်းမသိ ညမှန်းမသိ အလုပ်အကြွေး ပြုစုခဲ့ပါတယ် ။ ခု အရှင်မင်းကြီး ကတော့ ကျွန်တော်မျိုး အမှားလေးတစ်ခု လုပ်မိတဲ့ အပေါ်မှာ ဒီလောက် ကြီးမားတဲ့ ပစ်ဒဏ်ကို ပေးခဲ့ပါတယ် ။ ဘုရင့် အမိန့်အတိုင်း နာခံဖို့ အသင့်ပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်မျိုး အနွံတာခံ အလုပ်အကျွေး ပြုစုခဲ့တာလေးကို ထောက်ထားပြီး ဆယ်ရက်လောက် ကျွန်တော့်ကို အခွင့်အရေး ပေးပါ ။ ပြီးရင် မုချ ကျွန်တော့်ကို ခွေးတွေ ရှေ့မှာ ပစ်ချလိုက်ပါ "
ဒါနဲ့ ဘုရင်ကလည်း ဝန်ကြီးကို ဆယ်ရက်လောက် အခွင့်အရေး ပေးလိုက်တယ် ။ ဝန်ကြီးလည်း ဘုရင့်ဆီ ကနေ တန်းတန်း မတ်မတ် ခွေးတွေကို ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်တဲ့ သူဆီကို ထွက်လာခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ခွေးထိန်းကို ပြောတယ် ။
" ငါ ဒီခွေးတွေနဲ့ ဆယ်ရက်လောက် အတူ နေချင်တယ် ။ သူတို့ရဲ့ ဝေယျာဝစ္စ အားလုံးလည်း ငါတာဝန် ယူမယ် "
ခွေးထိန်းက ဝန်ကြီးရဲ့စကား ကြားတော့ အံသြ မှင်သက် သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် ခွင့်ပြု ပေးလိုက်တယ် ။ အဲ့ဒီဆယ်ရက် အတွင်း ဝန်ကြီးက ခွေးတွေရဲ့ စားသောက်ဖို့ အိပ်ဖို့ ရေချိုးပေးဖို့က အစ အလုပ်အားလုံးကို သေချာ တာဝန်ယူ လုပ်ကိုင်တယ် ။ ဆယ်ရက်ပြည့်တော့ ဘုရင်က သူ့ အခိုင်းအစေတွေ ဝန်ကြီးကို ခွေးတွေ ရှေ့မှာ ပစ်ချဖို့ အမိန့်ပေးတယ် ။
ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီမှာ ရပ်ကြည့်နေတဲ့ သူတွေ အားလုံး မြင်ကွင်းကို ကြည့်ပြီးအံ့အားသင့် သွားကြတယ် ။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ဒီနေ့ ဒီအချိန်ထိ ဒီခွေးတွေ ရှေ့မှာ မရေမတွက် နိုင်အောင် ဝန်ကြီးတွေ အသက်ပေးသွား ခဲ့ပြီးပြီ ။ ဝန်ကြီးတိုင်းကို အဲ့ဒီ ခွေးတွေက အပိုင်းပိုင်း အစစ လုပ်ပစ် ခဲ့တယ် ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီခွေးတွေပဲ ဒီနေ့ ဒီဝန်ကြီးရဲ့ ခြေထောက်တွေကို ယက်ပေးနေ ကြတယ် ။ ဘုရင်လည်း ဒါကို မြင်တော့ အံသြပြီးမေးတယ် ။
" ခွေးတွေ ဒီတစ်ခါ ဘယ်လို ဖြစ်သွား ကြရ တာတုန်း ? " ဆိုတော့မှ ဝန်ကြီးက ပြန်ဖြေတယ် ။
" အရှင်မင်းကြီး ကျန်းမာ ပါစေ ။ ကျွန်တော် အရှင်မင်းကြီးကို ဒီမြင်ကွင်းကိုပဲ ပြချင်နေ တာပါ ။ ကျွန်တော်မျိုး ဆယ်ရက်ပဲ ဒီခွေးတွေကို ပြုစု ခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒီခွေးတွေက ဒီနေ့ ကျွန်တော်မျိုး ပြုစု စောင့်ရှောက် ခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးတွေကို မေ့မသွား ခဲ့ပါဘူး ။ ကျွန်တော်ဟာ အရှင်မင်းကြီး ဆီမှာ နေ့ရော ညပါ ဆယ်နှစ်လောက်ထိ ပြုစု စောင့်ရှောက်ခဲ့တယ် ။ ဒါပေမယ့်လည်း အရှင်မင်းကြီးက ကျွန်တော့်မျိုးရဲ့ အမှားတစ်ခု အတွက် ကျွန်တော့်မျိုးရဲ့ နှစ်ပေါင်း များစွာ ပြုစုခဲ့တာတွေကို ကျောခိုင်းပစ် လိုက်တယ် "
အဲ့ဒီအခါမှာ ဘုရင်က သူ့ရဲ့ အမှား အပေါ်မှာ ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ခံစားမိသွားတယ်..
အဲ့ဒါနဲ့ ဝန်ကြီးကို အဲ့ဒီနေရာ ကနေ ခေါ်သွားခိုင်းပြီး မိကျောင်းကန် ထဲကို ပစ်ချခိုင်း လိုက်တယ် ။
ငယ်ငယ်တုန်းက ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ ကဗျာလေးကို သတိ ရသွားတယ် ။ မတရား လုပ်ဖို့ကိုပဲ စိတ်ပိုင်းဖြတ် ထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ကို အထောက်အထား သက်သေ သာဓကတွေ ပြနေရင်လည်း အလကားပါပဲ ။
( အကျင့် ယုတ်တဲ့လူက အကျင့်ယုတ်နေဦးမှာပဲ )